အထဲဝင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကျွမ်းကျင်သူများ - ထိပ်တန်းအတွင်းဘက်ဆိုင်ရာအကောင်းမြင်သူများစာရင်း
တနင်္လာနေ့, မေလ 14, 2012 သောကြာနေ့, စက်တင်ဘာလ 26, 2014 Douglas Karr
၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Dave Morse က မြစ်ဝကျွန်းပေါ် Faucet ၏စာရင်းတစ်ခုလုပ်ဘို့ယနေ့ငါ့ထံသို့ဂုဏ်ပြုလွှာအပေါ်လွန် 18 သိထားသင့်သောအဝင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကျွမ်းကျင်သူများ Marketo's Whitepaper မှာ: သင်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပိုမိုကျယ်ပြန့်စေပါ။ သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအစီအစဉ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုများပြားအောင်.
တစ် ဦး အဝင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကျွမ်းကျင်သူကဘာလဲ?
ဘက်ကစျေးကွက်ရှာဖွေရေး အလားအလာရှိသူ၏အာရုံကိုရယူရန်ထွက်သွားကြမည့်စျေးကွက်သမားများထက် visitors ည့်သည်များလာရောက်သည့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလှုပ်ရှားမှုများကိုရည်ညွှန်းသည်။ အတွင်းပိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည်ဖောက်သည်များ၏အာရုံစိုက်မှုကိုရရှိစေသည်၊ ကုမ္ပဏီကိုလွယ်လွယ်ကူကူတွေ့မြင်နိုင်သည်။ စိတ်ဝင်စားဖွယ်အကြောင်းအရာများကိုထုတ်လုပ်ခြင်းဖြင့်ဖောက်သည်များအား ၀ က်ဘ်ဆိုက်သို့ဆွဲဆောင်သည်။ ဝီကီပီးဒီးယား
Inbound Marketing Expert ကိုငှားရမ်းတဲ့အခါဘာကိုရှာသင့်သလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်အလုပ်လုပ်နေစဉ် အထွက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီကျွန်ုပ်တို့၏ချဉ်းကပ်မှုသည်အေဂျင်စီအများစုနှင့်မတူပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူနှင့်အတူဘတ်ဂျက်ကိုတည်ဆောက်သည်။ ၀ င်ရောက်လာသူအရေအတွက်ကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်အရှိန်အဟုန်ကိုတိုးတက်စေသောကိရိယာများနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန် ၀ င်ရောက်လာသူများနှင့်မဟာဗျူဟာများကို ဖြတ်၍ အလုပ်လုပ်သည်။
သင်၏အဝင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကျွမ်းကျင်သူသည်အရိုးစွဲနေသူဖြစ်သင့်သည် (ကျွန်ုပ်သည်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုလုံးနှင့်မသင့်တော်ပါ)၊ ရှာဖွေခြင်း၊ လူမှုရေး၊ အကြောင်းအရာ၊ အီးမေးလ်၊ analytics, သူတို့ကတစ် ဦး omni-channel ကိုအတွင်းပိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုလုံးဝနားလည်သင့်ပါတယ်။ ချန်နယ်တစ်ခုသည်အားလုံး၏မှန်ကန်သောမျှတမှုကိုရရှိမည့်ရလဒ်များကိုရရှိမည်မဟုတ်ပါ။
Wow - ဒါဟာတော်တော်လေးဂုဏ်ယူစရာပါ။ အထူးသဖြင့်အံ့သြလောက်အောင်ပါရမီရှင်တွေရဲ့စာရင်းထဲမှာကျွန်တော့်နာမည်ရှိတယ်။
မိုက်ကယ် Brito - @Britopian ကိုလိုက်နာပါ
Paul Gillin - @pgillin ကိုလိုက်နာပါ
Adam Metz - @theMetz ကိုလိုက်နာပါ
အမ်း Handley - @MarketingProfs ကိုလိုက်နာပါ
CC Chapman - @cc_chapman ကိုလိုက်နာပါ
ခရစ် Brogan - @ChrisBrogan လိုက်နာပါ
စင်ဒီဘုရင် - @CindyKing ကိုလိုက်နာပါ
မိုက်ကယ် Stelzner - @Mike_Stelzner ကိုလိုက်နာပါ
Guy Kawasaki - @GuyKawasaki ကိုလိုက်နာပါ.
ဂျက်ဖ် Bullas - @JeffBullas ကိုလိုက်နာပါ
Mari အဘိဓါန် Smith က - @MariSmith ကိုလိုက်နာပါ
Neal Schaffer - @NealSchaffer ကိုလိုက်နာပါ
Pam Moore - @PamMktgNut ကိုလိုက်နာပါ
ဖရန့်ရိဒ် - @FrankReed ကိုလိုက်နာပါ
မာယာ Grinberg - @Papayamaya ကိုလိုက်နာပါ
Kipp Bodnar - @kippbodnar ကိုလိုက်နာပါ
ဒန် Zarrella - @DanZarrella ကိုလိုက်နာပါ
အကယ်၍ သင် whitepaper ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်စိတ်ဝင်စားပါက Marketo ဆင်းသက်လာသောစာမျက်နှာမှခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ဖြစ်ပါသည်။
အလားအလာရှိသော ၀ ယ်သူများနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းနည်းလမ်းအားလုံး၏အားသာချက်ကိုရယူရန်ကြိုးစားနေသည့်ကုမ္ပဏီများသည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးထက်ကျော်လွန်ရန်လိုအပ်သည်။ ဤစာတမ်းသည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်ဆောင်ချက်များ၏သက်ရောက်မှုကိုပိုမိုကျယ်ပြန့်စေသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာများထဲတွင်အဝင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုမည်သို့ထည့်သွင်းရမည်ကိုကြည့်ရှုသည်။
အဆိုပါ အထွက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖြူရောင်စက္ကူ ဖုံးလွှမ်း:
အတွင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေး 101 - စတင်ရန်အကြံဥာဏ်များနှင့်နည်းစနစ်များ
မြင်သာနှင့်ရောက်ရှိရန်တိုးချဲ့ SEO နှင့်လူမှုရေးနှင့်အတူ
အတွက်စာရင်း အထဲ၌ချဲ့ခြင်း နှင့်အပိုဆောင်းမြှင့်တင်ရေးအခွင့်အလမ်းများကိုဖော်ထုတ်
Tags: Adam Metzအမ်း HandleyCC Chapmanခရစ် Broganစင်ဒီဘုရင်ဒန် Zarrellaဖရန့်ရိဒ်Guy Kawasakiဘက်ကစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအထွက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကျွမ်းကျင်သူဂျက်ဖ် BullasKipp BodnarMari အဘိဓါန် Smith ကမာယာ Grinbergမိုက်ကယ် Britoမိုက်ကယ် StelznerNeal SchafferPam MoorePaul Gillin
မေလ 15, 2012 မှာ 9: 42 AM
မေလ 15, 2012 မှာ 2: 25 pm တွင်
ကောင်းပြီ Doug ထိုက်တန်!
မေလ 29, 2012 မှာ 1: 41 AM